I ▷ Philips HD9621 / 90 Fryer | Fikradaha iyo Qiimaha ugu Fiican
Philips HD9621/90 shiilan qoto dheer
Waxaan soo bandhignaa horumarka mid ka mid ah Qalabka hawada iibinta ugu badan ee suuqa. Haddii ay wax shaqeeyaan, ha beddelin, ilaa ay tahay in la hagaajiyo mooyaane, taasina waa waxa calaamaduhu ay rabeen inay ku sameeyaan iibkooda ugu fiican, Philips HD9220/20.
Waxaan si faahfaahsan u falanqeyn doonaa nooca loo yaqaan Airfryer HD9621 / 90, si aan kuu sheegno waxa hagaajinta marka la barbar dhigo kuwii ka horreeyay iyo haddii ay u qalanto kordhinta qiimaha. Shirkadu runtii ma ku guulaysatay inay horumariso badeecadeeda calanka ah? nala soo hel!
In kasta oo sifooyin badan oo ay ku beegan tahay walaasheed, waxaan ku falanqeyn doonaa dhammaan tilmaamaheeda oo kaliya ma ahan hagaajinta, ka dibna isbarbardhigga kuwa ay sida tooska ah u xafiiltamaan. U bax
Cusboonaysii: moodelkan Philips waxa lagu bedelay HD9252 ka aad u casrisan oo xitaa ka jaban:
Haddii aad weli xiisaynayso inaad ogaato sifooyinka qaabkii hore, falanqaynteena waxaan kuu sheegi doonaa wax walba.
➤ Iftiiminaya Philips HD9621/90
Sida caadiga ah dib u eegistayada, marka hore waxaan raacnaa sifooyinka ugu muhiimsan ee qaabkan
▷ Nakhshad badan oo is haysta
Sida saxda ah ee naqshadeynta waa mid ka mid ah hagaajinta qaabkan. Wali waa qalabka khaanadaha la soo bixi karo iyada oo la adeegsanayo gacanteeda, in kasta oo philips ay sheeganayso in ay boqolkiiba 20 ka yar tahay shiilantooda ugu iibinta badan. Muuqaalkeeda ayaa weli ah mid aad u yar oo leh xoogaa xariiqyo labajibbaaran waxaana lagu heli karaa madow.
Cabirka (W x D x H): 365x266x292 mm
Shiileeyaha wuxuu ku fadhiyaa cago aan simbiriirixan lahayn, bannaankiisa qabowna wuxuu ka samaysan yahay caag. Faahfaahinta aan ku jecelnahay aaladda inta badan ku taal goobta shaqada waa fiilada fiilada lagu dhisay dhabarka.
▷ 0.8 kg awoodda
Philips wuxuu ku guuleystey inuu yareeyo cabbirka bannaanka ee Fryerkiisa isagoo ilaalinaya isla awoodda kii ka horreeyay, 800 garaam
Awoodan ayaan ku diyaarin karnaa saddex ilaa afar xabbo ee cuntada, sidaas darteed maaha doorashada ugu fiican ee qoysaska waaweyn, in kasta oo ay ansax u tahay qoysaska intooda badan.
▷ Awoodda ugu badan
Awoodda ugu badan ee qaabkani sidoo kale ma kala duwana, sii joogitaanka 1425 watts, ku filan si loo gaaro cunto karinta isku mid ah.
Iska caabinta waxaa maamula a heerkulbeegga analoogga taas oo u ogolaanaysa in ay habayso heerkulka inta u dhaxaysa 80 iyo 200 digrii sentimitir.
Philips Airfryer 9621 waxa uu leeyahay saacada analooga ah oo la hagaajin karo inta u dhaxaysa 1 iyo 30 daqiiqo ugu badnaan. Waxay leedahay xidhid toos ah waxayna ku tusinaysaa dhawaqa dhamaadka in suxuuntayadu diyaar u yihiin in lagu adeego.
Qaar ka mid ah waqtiga iyo talooyinka heerkulka ee cuntooyinka qaarkood ayaa silk-ka lagu baadhay qaybta sare ee qalabka.
▷ RAPIDAIR IYO TURBOSTAR Technologies
Marka laga soo tago tignoolajiyada RapidAir, taas oo maamusha in ay yarayso wakhtiyada karinta, qaabkani waxa uu ku darayaa tignoolajiyada kale ee Philips ee loo yaqaan TurboStar. Sida muuqata, mahad tignoolajiyadan waxaa la sameeyaa dubista isku midka ah ee cuntada iyada oo aan loo baahnayn in lagu kiciyo.
Fikradeena waa faa'iido weyn, taas oo u oggolaanaysa in lagu kariyo hab fudud oo raaxo leh iyada oo aan la socon cuntada.
▷ Nidaamka nadiifinta QuickClean
Mid ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ee shiilan-la'aanta saliidda ayaa ah inay nadiif yihiin inta lagu jiro isticmaalka, ka fogaanshaha qulqulka iyo ur.
Intaa waxaa dheer, labadaba khaanadaha la rari karo iyo dambiisha hawo-qaadiyahan waxaa si toos ah loogu dhaqi karaa makiinada weelka.
Si loo fududeeyo nadiifinta oo loo helo natiijooyin wanaagsan, dambiishu waxay leedahay mesh aan dhejisnayn oo la saari karo, nidaam la baabtiisay sida Quickclean ee sumadda.
▷ Buuga Cunto karinta iyo Codsiga Mobilka
Philips ma rabo inaad u isticmaasho Fryer-kaaga Saliid la'aanta ah oo kaliya shiilan dufan yar leh, waxay rabaan inaad u isticmaasho dubista, dubista, shiilan iyo xitaa dubista. Si aad uga faa'iidaysato, waxa ku jira buug cunto karinta oo nooc kasta leh.
Waxa kale oo aad kala soo degsan kartaa Philips Airfryer Android/iOS abka bilaashka ah ee leh:
In ka badan 200 oo tallaabo-tallaabo cunto cunto ah
Talooyinka nadiifinta shiilankaaga qoto dheer
Qiimaha Philips Airfryer HD9621/90
Qiimaha qaabkani wuxuu ku saabsan yahay 50 euro ka sarreeya kii ka horreeyay maadaama RRP uu ku dhow yahay 190 euro. Philips waa mid ka mid ah noocyada ugu qaalisan ee qalabkan yar yar, kaas oo aan u muuqan inuu saameynayo iibkiisa.
Inkasta oo qiimaha lagu taliyey uu xoogaa sarreeyo, badanaa waxaa lagu heli karaa qiimo dhimis.
Cusbooneysii: Waxaan ku cusbooneysiinay dalabka qaabka cusub ee ka wanaagsan oo ka jaban, markaa dhammaantood waa faa'iidooyin.
Hd9621/90 Fryer waxaa ku jira dammaanad laba sano ah oo caalami ah, sida qalabka intiisa kale ee astaanta.
Hoos u dhigista cabbirka iyo gaar ahaan ku darida tignoolajiyada turbostar waxay u egtahay guul laga gaaray dhinaca philips. Thanks to technology this, natiijada karinta ka wanaagsan iyo isticmaalka fudud ayaa la gaaray, wax runtii xiiso leh.
Si loo soo koobo badeecada, waxa kaliya ee maqan ayaa ahaa casriyeynta kontoroolka oo leh shaashad LCD ah iyo barnaamij-sameeyaha dhijitaalka ah. Waqtigeeda iyo nidaamka heerkulka waa mid wax ku ool ah oo sahlan in la isticmaalo, laakiin qaabka qiimahan waxaan ku luminay guddi noocaan ah, maadaama ay leeyihiin calaamado jaban.
▷ Reviews Buyers
Waqtiga aan falanqeynay qaabkan, wuxuu lahaa 4.2 marka loo eego 5 ee Amazon iyo 4 ee 5 ee bogga rasmiga ah ee Philips. Mar labaad waxay u muuqataa in isticmaalayaashu ay ku qanacsan yihiin badeecada ka timi nooca Airfryer. Halkan waxaad ku arki kartaa qaar ka mid ah fikradaha iibsadayaasha Deep Fryer:
"Si fudud sida ugu dhaqsaha badan uguna fudud ee aad cashada ugu karin lahayd adiga iyo qoyskaaga. Wax walba waan kariyay laga bilaabo kubbadda hilibka ilaa bowdada ilaa bowdada digaagga. Waxaa jira boqolaal cuntooyin degdeg ah oo fudud in la nadiifiyo. Fikradayda waxay ku filan tahay qoys afar ka kooban."
"Waan jeclahay qaboojiyaheyga qaboojiyaha, waxay u qabataa wax walba si cajiib ah. Wax cabasho ah ma jirto marka laga reebo in aan jeclaan lahaa in aan mid ka weyn yeesho. Waxaan sameeyaa shiilan faransiis ah, kood barafaysan, tacos, digaag, baradho la dubay waanan jeclahay dhamaantood
Akhri wax badan oo Ra'yi ah
▷ Isbarbardhigga moodallo la mid ah
Jadwalkan waxaan ku barbar dhigeynaa qaabkan astaanta Jarmalka iyo shiilanyada kale ee la midka ah ee aan ka heli karno suuqa.
Ma haysaa barnaamij hore loo diyaariyey? Maya, kaliya waxaad dooran kartaa wakhtiga la rabo wakhtiga isticmaalka.
Ma keentaa buug wax lagu kariyo? Waxa ku jira buug-cunto-karin si aad uga faa'iidaysato.
Ma inaad walaaqdaa cuntada?: Sida laga soo xigtay philips ma aha lagama maarmaan, si aad u qorsheyso waqtiga oo aad illowdo.
➤ Iibso Philips HD9621/90 Saliid Fryer bilaash ah
Ilaa hadda falanqaynteena ku saabsan moodal ka mid ah noocyada ugu fiican ee Fryers Oil Free. Haddii aad u malaynayso in qalabkani buuxinayo baahiyahaaga, waxaad ka heli kartaa mid halkan:
(Codadka: 6 Celcelis: 4.3)
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » ⭐ Philips Air Fryer » HD9621 / 90